Le Moulin de Pilet 4* - Proche Puy du Fou - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAgence Cocoonr / B&P
Yakhelwe ngenkulungwane yeshumi elinesithandathu, iLe Moulin de Pilet yikhokho eshushu egcwele imbali kwaye ibekwe kwindawo eluhlaza. Ifakwe kwi-4 iinkwenkwezi kwaye ibuyiselwe ngokupheleleyo ngo-2015, inamanqaku amadala kunye nala maxesha, indawo yokusila ingakwazi ukuhlalisa ngokukhululekileyo abakhweli abayi-6 ngenxa yamagumbi ayo okulala ama-2. Uyakonwabela le setingi ikhethekileyo, ukusuka kwibalcony, ithala, okanye igadi eyi-250 m2 ejonge EMZANTSI. Ilinen kunye neetawuli zinikezelwe. Ndizokubona ngokukhawuleza !
Ngommandla we-140 m2, ilitye lokusila liziveza ngolu hlobo lulandelayo:
-Ikhitshi elahlukileyo kunye nezixhobo, kunye nesiqithi esiphakathi: i-dishwasher, i-oven, i-hob, ifriji, i-tee / umatshini wekofu, i-toaster, izitya kunye ne-cutlery, itafile yokutyela yabantu aba-6. Ikhitshi ibonakaliswe kwi-EST, kwaye inokufikelela ngokuthe ngqo egadini.
- Ukuhlamba apho kukho izixhobo ze-DIY, izixhobo zegadi. Ukufikelela ngokuthe ngqo egadini ukusuka kwindawo yokuhlamba impahla.
-Igumbi lokuhlala elikhulu elivezwe EMZANTSI, linezitulo zomlilo, indawo yomlilo (engasebenziyo), isitovu, ithala leencwadi, i-space-repas, iTV. Uya kuba nemibono emangalisayo yomlambo ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye ne-balcony yayo.
- Igumbi lokuqala elibizwa ngokuba yi "Roseau", elinebhedi ephindwe kabini i-140 cm x 190 cm kunye ne-wardrobe enkulu. Eli gumbi le-EST eliveziweyo liya kukunika umbono wegadi kunye nomlambo.
- Igumbi lesibini elibizwa ngokuba yi "Rocher", elineebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye newadi enkulu. Eli gumbi likwabonelela ngeembono zegadi kunye nomlambo.
- I-mezzanine, ebizwa ngokuba yi "Milou de Poulet", eneebhedi ezimbini ezingatshatanga. Indawo yeyabantwana (ubude obona bude buyi-1.40m).
-Igumbi lokuhlambela elineshawa, iisinki eziphindwe kabini, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi
Isitiya esingama-250 m², esingahoywanga kwaye sijonge EMZANTSI. Umyezo uvalelwe kwaye uya kukunika ukufikelela ngokuthe ngqo nangasese emlanjeni: La Sèvre Nantaise. Igadi, enethafa elinomthunzi, ixhotyiswe ngebarbecue, ifenitshala yegadi kunye nezitulo zokulala. Uya kuba nayo itafile yePing-Pong onayo! Yonke into iya kwenziwa ukuqinisekisa ukuba uhlala olona lonwabo.
Nokuba usemagumbini, ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlala, uya kukonwabela umbono weLa Sèvre Nantaise kunye negadi!
Ifumaneka embindini wentlambo, kumlambo i-Sèvre Nantaise, i-Moulin de Pilet iyakuqinisekisa ukuba uhlala umnandi kakhulu udibanisa ukuzola kunye nokuphumla. Ukuhamba ngemizuzu engama-20, uya kufumana zonke iivenkile zalapha kwilali yaseMortagne-sur-Sèvre. Unokuthatha ithuba lentengiso rhoqo ngoLwesibini kusasa eMortagne-sur-Sèvre kwaye rhoqo kusasa kwindawo yeCholet 12 kms kude.
-Parc du Puy du Fou, wavota eyona paki ibalaseleyo emhlabeni, imizuzu engama-20 ngemoto
- Ukuhamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile ecaleni komlambo iSèvre
-Ndwendwela idolophu yakudala yaseClisson, imizuzu engama-30 ngemoto
-Ipaki yaseMpuma yaseMaulévrier (eyona gadi inkulu yaseJapan eYurophu) ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ngemoto
- Ukuqeshwa kwephenyane kunokwenzeka ecaleni kwendawo yokusila
- Indawo ye-Aqualudic "Le Triton" iikhilomitha ezi-3 kude
-I-cinema kunye nemidlalo yangaphakathi idibanisa imizuzu engama-20 kude: i-bowling, i-squash, i-paddleball, ibhola ekhatywayo, i-kart yombane. . .
Umbuki zindwendwe ngu- Agence Cocoonr / B&P
Izimvo eziyi-3 491
Ndisesandleni sakho ukuba uyandidinga.